MUST READ, Ra’yi MOOSHINKA CUSUB, IYO SEDEXADA MURSAL EE DALKA QASAYA, | JAALENEWS
MUST READ, Ra’yi MOOSHINKA CUSUB, IYO SEDEXADA MURSAL EE DALKA QASAYA,
Published on December 10, 2018 by Ashuraym · No Comments
Inkastoo aanan taageersaneeyn siyaasadda jar iska tuurka iyo dag dagga Ku dhisan ee doowlada NABAD IYO NOLOL, hadana waxaan kasoo horejeedaa in xiligaan wadanka qalalaaso siyaasadeed la galiyo, halkii wax la sixi lahaana Laga dumiyo.
In kastoo aanan mahad celin gaar ah uga hayn (saa masuuliyadoodeey aheeydee) hadana waxa aan la xaqiri Karin, doorka eey Ku leheeyd xukuumada nabad Iyo nolo Soo siideeyntii maxaabiista soomaliyeed ee Ku dulmanaa dal Iyo dibad. Waxaa kaloo la iska indha tiri karin niyad samida, qof-nimada iyo sifooyinkaka wanaagsan ee madaxweeyne Mohamed Abdullahi Farmaajo.
Balse, hadeey niyad sami Iyo qofnimo ama sifooyin wanaagsan wax utareeyso somali, cabdi qaasim salad xasan baa dowladnimo Ku keeni lahaa. Lkn baahida jirta waa Karti, howl-karnimo, hufnaan Iyo wax qabad.
Ma ahi mucaarad mutaxan oo maryaha tuurtay Iyo qof si alle uga soo horjeeda madaxweynaha Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo Iyo dowladiisa la dhisay February sanadkii tagay.
Sidoo kale maahi muxaafid indha-la’aan iska taageera una sacabba tuma madaxweynaha, lana wareega sawiradiisa baraha bulshada, kaliya waxaan isku dayyayaa inaan wax ka iraahdo arrintaan MOOSHINKA cusub oo muhiim u ah labada qolo ee mucaaradka Iyo kuwa muxaafadka ah.
Mooshin Madaxeyne-rid looma baahna xilligaan ee waxa loo baahanyahay xildhibaanno ku dhiirado in heshiisyada caalamiga ee xukuumaddan & tii ka horeysay galeen si daacadnima ah dib uugu eegaan. In Maxkamadda Dastuurka, Guddi Madaxbannaan ee la Dagaallanka Musuqa &….aasaasaan. 🇸🇴 https://t.co/s45c3FtkbJ
— Abukar Arman (@Abukar_Arman) December 9, 2018
MOOSHINKAAN XAGUU SALKA KU HAYYAA?
Waxaa baryahaanba khilaaf udhexeeyay gudoomayaha baarlamanka Somalia Iyo hogaanka sare ee xukuumada nabad Iyo nolol. Khilaafkaas oo Ku saleeysan labo arrimood:
1: faragalinta eey Ku heeyso dowladda dhexe doorashada la filaayo in eey ka dhacdo maamul goboleedka koonfur galbeed.
2: Musharraxnimada mukhtaar rooboow oo eey dowladu kasoo horejeesatay.
Hadaba, su’aasha isweeydiinta mudan waxey tahay: Isla doowlada NABAD IYO NOLOL Soo ma aheeyn tii Soo badbaadisay, soona dhaweeysatay muqtaar rooboow, kuna heeysay muqdisho, amaankiisa Iyo noloshiisana qarash badan ku baxineeysay?
Muqtaar Rooboow, Soo ma ahan ninka daadiyay dhiigga Somali Fara badan, ilaa hadana aan halmar cadeeyn inuu ka toowbad keenay oo marna aan cafis weydiisan umada uu dambiga ka galay?. Gudoomayaha baarmaanka se, soo maahan ninkeey shalay ayaga keensadeen ayagoo malaayiin dollar Ku bixiyay si loogu baddalo Jawaari? Miyuusan aheeyn ninkaad shalay u sacab-tumeeyseen adinkoo Ku hadaaqaya NABAD IYO NOLO? Hadaba muxaafadoow maxaad Ku taageertay madaxweeyne Farmaajo?
MAXEEY YIHIIN MUCAARADKA ?
Qaar ka mid ah mucaaradka Farmaajo WA kuwa siyaasad eey isku heeystaan, kuwa waa qabiil waxa ugu weeyn eey umucaaradeen, halka kuwa kalena dano shaqsi ah eey kaga Hor imaadeen. Hadaba mucaaradoow maxaad kaga Soo horejesatay madaxweeyne Farmaajo?
Mucaaradka ma mid wax dumiyaa mise waa mid iftiimiya khaladka jira asago uga gol Leh in la saxo qaladkaas? Mucaaradkuse ma leeyhihiin siyaasad qayyaxan eey dalka Ku hagaan?
Hadaba su’aalahaas Iyo kuwa la midka ah markaad jawaab uhesho ayaad ogaan kartaa waxa ay mucaarad-nimadaadadaadu ama muxaafad-nimadaadu salka ku heeyso.
Muxaafadnimadu maahan wadada kaliya ee wadani lagu noqdo, halka eeysan mucaaradnimaduna aheeyn toobiyaha ku tilmaaman qaran naceeybka Iyo daalimnimada.
Waxaa hubaal ah, in eey akhlaaq beeshay siyaasadda Somalia, oo waxaad ka arki kartaa, baarlamaanadeena Iyo doorashooyinkeena waxaa go’aamiyya lacag. Oo waxaa dhaqan unoqday qaacidada ah “ninkii lacag lahaa reerka uhari”.
Waxaan Qoraalkeeyga kusoo xirayaa, hadal uu yiri Raiisul wasaarihii hore ee ingiriiska; Winston Churchill:
“Haddii aad rabto in aad ogaato dadka dunida ku nool, waxaad eegtaa baarlamaanka matala dadkaas, kadibna waxaad ogaan doontaa dadka u qalma in lagu tuuro ubax ama kuwa u qalma in lagu dhufto kabo!
Madaxweeyne guuleeyso, libintaadu waa teenna, ee naqdintu waa qeyb ka mid ah dowladnimada.
Waxaa qoray: Sharmake Abdiaziz
NOLOL IYO NABAD!
2 MURSAL FALDAGAN
“WAXAAN AHAY FANAAN QARAN”
Faladagan Oo sii wata kufsigisa Fanka ayaa tageera yaashiisa ka codsaday halka uu ku qaban doono showgiisa uu ku macsa laamaynayo sanadka 2018 ka oo Uu kufsi u geystay fanka.
# MURSAL MUSE OO Laga soo dulqaaday qadra saliima, iyo Hodan Cabdi raxman oo Game cusub cayaartay.
Kadib Marku Mursal muse Qimeen Ku Sameye Passport American,ka & Qadro Salima Waxaaa U So Baxday inuu Passport,Ka American,Ka Raaco Asago Sii Raciye Folxumo & Africa Jogisteda Passport American Baan Ka Xigaaa…..
isla Markiii Qadro Salima Oo Shaxurteda Ad U Kacsan Baa Ku Hestay iney Nasab Tahay Licin Ebed Ayadoo Ku Karbashee Mursal & Hodan…
Mursal Muse Ayaaa Ku Jwbay isla Hees Ah Adoo Magac ila wadago Sidee Marwo Shisheye Nafta Ula Mideyaaa Hodaney!!
Halkaas Marke Maree Shekada Hodan Abdirahman Oo Qosle Baaa Tiri Passportka Baa ii Hadlayo